After Match Report
Menu Home Team Video Latest News After Match Report Social Activity Club Gallery Contact
''ပွဲမစခင် ကျွန်တော်တို့က ရေပန်းမစားပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ အစောပိုင်းမှာဂိုးပေးလိုက်ရပေမယ့်ဖိအား ပေးနိုင်ခဲ့သလိုအခွင့်အရေးကောင်းတွေအများကြီးရခဲ့ပေမယ့် အသုံးမချနိုင် ခဲ့ပါဘူး။ အိမ်ရှင်အားသာချက်ရှိပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး သရေတစ်မှတ်ရခဲ့သင့်တာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ တစ်ပွဲထက်တစ်ပွဲ ပိုကောင်းလာအောင် ကြိုးစားရမှာပါ'' ဂျော်ဒန် (ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီတိုက်စစ်မှူး)
Posted Date 07 Feb
ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီ၏ Co-Sponsorအဖြစ် Orona အမှတ်တံဆိပ်မှကူညီပံ့ပိုးသွားမည်
၂၀၁၅ခုနှစ်မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီ၏ Co-Sponsorအဖြစ် Myanmar Mahar Htun Co.,Ltd.မှကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး Oronaအမှတ်တံဆိပ်လိုဂိုအားရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီ၏ဂျာစ်ီရင်ဘတ်ညာဘက်တွင်တပ်ဆင်အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။ Orona အမှတ်တံဆိပ်သည် စပိန်နိုင်ငံထုတ်ဓါတ်လှေကားအမျိုးအစားဖြစ်ကာ Myanmar Mahar Htun Company မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ပါဂျာစီများကိုရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီအနေဖြင့်ယခု၂၀၁၅ဘောလုံးရာသီအပြီးအထိဝတ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့စပွန်ဆာအဖြစ်ပံ့ပိုးမှုရရှိခဲ့ခြင်းနှင့််ပတ်သက်ပြီးရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းမန်နေဂျာ ဦးထွန်းထွန်းဝင်းက ''အခုလို Orona နဲ့လက်တွဲခွင့်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုစပွန်ဆာအနေနဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်မြန်မာမဟာထွန်းကုမ္ပဏီကိုရောOronaကိုပါအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီမှုဟာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အကျိုးရှိမှာဖြစ်ပြီးနောက်ရာသီတွေမှာလည်းဆက်လက် တွဲနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်''ဟု အသင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီသည် လာမည့်တပါတ် ဇွဲကပင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီနှင့် ပွဲစဉ်မှ စပြီးOrona အမှတ်တံဆိပ်ပါဂျာစီဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည်ဖြစ်ကာယခုတပါတ်ပွဲစဉ်(၅)အဖြစ် လာမည့်စနေနေ့ ညနေ ၃နာရီခွဲ တွင် ပုသိမ်မြို့ကျောက်တိုင်ကွင်း၌ ဧရာဝတီယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီနှင့်ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ ‪#‎RUFC‬
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ် ပွဲစဉ်(၅) ဧရာဝတီယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီ နှင့် ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီ ပွဲကြိုအချက်အလက်များ
- ယခုပွဲစဉ်မတိုင်မှီ နှစ်ဖက်အသင်းကစားသမားများနှင့်တာဝန်ရှိသူများသည် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမားဟောင်းဦးဘပုကွယ်လွန်ခြင်းအတွက်ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် အဖြစ် တစ်မိနစ်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့် ဂါရ၀ပြုကြမည်ဖြစ်သည်။ - ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီသည် အကျီင်္ အဖြူ၊ ဘောင်းဘီ အဖြူနှင့် ခြေအိတ်အဖြူတို့ကိုဝတ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။ - ယခုပွဲစဉ်ကို ညနေ(၃:၃၀) နာရီတွင် ကစားမည်ဖြစ်ကာ ရခိုင်ယူနိုက်တက်အ က်ဖ်စီအတွက် အဝေးကွင်း(၃)ပွဲဆက် ကစားရခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ - ယခုပွဲစဉ် တိုက်ရိုက်ဂိုးရလဒ်များ မိနစ်အလိုက်တင်ဆက်မှုကို ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီ၏ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာမှ အချိန် နှင့်တပြေးညီတင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ‪#‎RUFC‬
Posted Byွှadmin
ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းသည်ယခုနှစ်ဘောလုံးရာသီအတွက်ခေါ်ယူခဲ့သောနိုက်ဂျီးရီးယားကွင်းလယ်လူဒေးဗစ်အား ITCအခက်အခဲကြောင့် မြန်မာနေရှင်နယ် လိဂ်မှတ်ပုံတင်ထားရှိမှုအားပယ်ဖျက်ခဲ့ပြီးစာချုပ်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။. အဆိုပါကစားသမားသည် နိုက်ဂျီးရီးယားရှိ အကယ်ဒမီထွက်ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ကာ နောက်ဆုံးအချိန်အထိအသင်းဘက်မှ ITCရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ခွင့်ပြုကာလကျော်လွန်ခဲ့သောကြောင့် စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းစီအီးအိုဦးရဲနိုင်ဦးက ''ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီမှာ နိုင်ငံခြားသားကစားသမား(၃)ဦးခေါ်ယူဖို့ ခြေစွမ်း စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှခေါ်ယူစာချုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကွင်းလယ်လူ ဒေးဗစ်ကတော့ ခြေစွမ်းပိုင်းကောင်းမွန်ပေမယ့် အကယ်ဒမီကစားသမားဖြစ်တဲ့ အတွက် ITCရရှိဖို့ ကြန့်ကြာနေခဲ့ပြီး အသင်းဘက်ကရောမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်ကပါ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပေမယ့် အဆင်မပြေခဲ့တဲ့အတွက် စာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့်အပြောင်းအရွှေ့ဖွင့်ချိန်မှပဲ ပြန်လည် ခေါ်ယူဖို့လုပ်မှာပါ''ဟု အသင်းဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းသည်နိုင်ငံခြားသားကစားသမားနစ်ဦးဖြစ်သူနောက်တန်းကစားသမားဘားနက်နှင့်တိုက်စစ်မှူးဂျော်ဒန်တို့ကိုသာပြည်တွင်းကစားသမားများဖြင့်စုဖွဲ့ယှဉ်ပြိုင်သွားရမည်ဖြစ်ပြီးလာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပွဲစဉ်(၂)အဖြစ် မကွေးအက်ဖ်စီနှင့် သုဝဏ္ဏကွင်း၌ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ် သည်။
Posted Date 05 Feb
Posted By ThetHtooNaingOo
မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပွဲစဉ်(၂) ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီ နှင့် မကွေးအက်ဖ်စီ ပွဲကြိုအချက်အလက်များ
- ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီသည်အင်္ကျီအဖြူ ဘောင်းဘီအဖြူ ခြေအိတ်အဖြူတို့ကိုဝတ်ဆင်ယှဉ်ပြိုင်မည်။ - နောက်ဆုံးယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့သောပွဲစဉ်များတွင် မကွေးအက်ဖ်စီကရတနာပုံအက်ဖ်စီနှင့်အဝေးကွင်းတွင်သရေကျခဲ့ကာရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီမှာရန်ကုန်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီအားဂိုးပြတ်ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့သည်။ - ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုမှတ်တမ်းအရ ရခိုင်ယူနိက်တက်အက်ဖ်စီသည်မကွေးအက်ဖ်စီအား၂၀၁၃မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်တွင်၂-၁ဂိုးရလဒ်ဖြင့်ရှုံးနိမ့်ထားခဲ့ပြီးယခုရာသီအကြိုခြေစမ်းပွဲတွင်မူ၂ပွဲကစား၁ပွဲရှုံး၁ပွဲသရေကျခဲ့သည်။ - ရခိုင်ယူနိုက်တက်အက်ဖ်စီမှ တောင်ပံကစားသမားနိုင်နိုင်ကျော်မှာရန်ကုန်နှင့်ပွဲတွင်ရရှိခဲ့သည့်ဒဏ်ရာကြောင့်ယခုပွဲကိုဝင်ရောက်ကစားနိုင်ရန်သေချာမှုမရှိသေးပေ။ - ပွဲမတိုင်မှီ ရခိုင်ပရိသတ်ကြီးအတွက်အသင်းဂျာစီများ ဖန်ဂျာစီများနှင့် အမှတ်တရပစ္စည်းများကိုရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Founded as Rakhine United FC Football Club isaprofessional football club, based in Rakhine State, that plays in the Myanmar National League. Rakhine United Football Club in 2009, the club changed its name to Rakhapura United in December,2010. Home Stadium to use Waytharli Yinpyin in Sittwe Township, Rakhine State.
H&T techs - Produce an App for Others is Worth Living.